Degmada Norberg waa degmo caan ku ah buuraha qodida macdanta, waxeeyna ka mid tahay degmooyinka ugu qadiimsan ee laga soo saaro macdanta ee wadanka Iswiidhan. Degmadu waxeey ka koobantahay xaafadaha kala ah Norberg oo eey ku taal Kärrgruvan iyo Karlbenning. Waxaa kaloo jira tuulooyin yaryar oo ku yaal degmada bannaankeeda. Degmada Norberg waxeey ku taal waqooyiga gobolka Västmanland waxeeyna xiriir la leedahay magaalooyinka Fagersta, Sala iyo Dalarna (Smedjebacken, Hedemora iyo Avesta). Deegaanka waxuu inta badan ka koobanyahay keymo iyo dhulbeereed waxaa kaloo ku badan balliyada. Boqolkiiba 80% waxeey dadka degmada degen yihiin bartamaha degmada.
Waa degmo quruxbadan kuna haboon in carruurta lagu korsado.
Degmada Norberg waxeey leedahay dugsiyada hoosedhexe 1-9.
Dugsi sare iyo sfi waxeey ku yaallaan Fagersta.
Rugta caafimaadka iyo iyo rugta ilkaha waxeey ku yaallaan bartamaha Norberg. Waxaa kaloo isla meeshaas ku yaal rugta daryeelka hooyada, rugta daryeelka carruurta iyo rugta daryeelka qoyska "Lärkan"
Samordnare , Våld i nära relationer Stödpedagog
Specialpedagog / speciallärare F - 3 Speciallärare
Undersköterska 75% Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
undersköterska 100% Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Sjuksköterska natt 64 , 5 - 100% Sjuksköterska, grundutbildad
Kockar Kock, storhushåll
Förskollärare eller personal med annan lämplig pedagogisk utbildning Lärare i förskola/Förskollärare
Besöksintervjuare i Norberg Intervjuare, opinionsundersökning
Legitimerad Farmaceut till Apoteksgruppen Norberg Farmaceut/Receptarie
Utbildare Clockwork Industrimatchning Speciallärare
Farmaceutisk rådgivare till Apoteket Lejonet i Fagersta Farmaceut/Receptarie
Leg psykolog eller PTP - psykolog , i spännande klinisk miljö Klinisk psykolog
Programmerare med monteringsvana IT-tekniker/Datatekniker
Sjuksköterska / distriktssköterska Mitt Hjärta Vårdcentral , Fagersta Sjuksköterska, grundutbildad
Distriktssköterska / sjuksköterska Mitt Hjärta Vårdcentral Fagersta Distriktssköterska
Bogga 1 ee ka mid ah 4
Fagersta kommun 11 km
Avesta 22 km
Västerås 80 km